Uxinzelelo lwedijithali Gauge, Utshintsho kuxinzelelo lwedijithali, inqanaba lesenzi -i-MEOKON
MD-S625EZ IDIGITAL ELECTRO Ukuqhagamshela ingcinezelo S ...
I-MD-EL ye-Electromagnetic Flowmeter
Umjikelo woPhuhliso olufutshane
Icandelo lezeMveliso yePetroleum
Gcwalisa iYunithi yokuSeta
Luphi uluhlu lwethu lweshishini: Ukuza kuthi ga ngoku sele simisele iinkqubo zearhente yeprosy eAlgeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia nakwamanye amazwe akumazantsi mpuma Asia. Kwakhona kuMbindi Mpuma nakuMzantsi Merika. Sineqabane kunye nenani elikhulu labathengi.
Ngophuhliso lwe-Intanethi lwezinto kunye netekhnoloji yedatha enkulu, kunye nokuphunyezwa okukhawulezileyo kwamakhaya akrelekrele kunye nezixeko ezi-smart, uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye nokwenza imveliso kwimizi engenazingcingo nayo iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Kule meko, kanye iBluetoo ...
Ukulungiselela ukuphucula ubumbano lweqela, unxibelelwano nentsebenziswano; ukuphucula ukuqonda kolwazi ngentsebenziswano esebenzayo kunye nezakhono zonxibelelwano, ukukhuthaza amalungu eqela ukuba ajongane nomceli mngeni, azigqobhoze kubo, anokubakho amandla, kunye nokukhulula ukuthanda; yandisa inkcubeko ...